Dhanka kale hey'adda caafimaadka ee Britain ayaa sheegtay in ay sare u qaadeyso heerka baaritanaada xanuunka corona, maadaama ay sare u kacayaan dadka uu ku dhacayo caabuqaas. Waxaa kale oo ay sheegeen in maalintiiba kun qof laga baari karo xanuunka.
Wasiirka waxaa kale oo ay sheegtay in hey'adda caafimaadka ee England ay haatan bilawday inay raadiyan dadkii ay la macaamiishay ama ay la kulantay iyo shaqaalihii ka shaqeynayay wasaaradda caafimaadka ee ay madaxda ka tahay.
Wasaraadda caafimaadka ee ay hogaamiso waxaa ay xaqiijisay in khamiistii lasoo dhfaay laga helay astaamaha xanuunka, xilligaas oo ay booqatay aqalka looga arrimiyo dalka Ingiriiska ee Downing Street, waxaana halkaas ay kula kulantay ra'iisul wasaaraha Britain, Boris Johnson.
Ilaa iyo hadda lama oga in xanunkaas uu ku dhacay ra'iisul wasaaraha iyo inkale iyo in laga baaray.
"Waan dareemi karaa sababta dadka ay uga walwalsan yihiin xanuunkan, waxaan sameyn doonaa waxwalba oo karaankeena ah, si looga shaqeeyo badqabka dadka,"ayay tiri.
Sababta arrintan ayaa lagu sheegay inay tahay sidii looga gaashaman lahaa faafidda xanuunka oo fara ba'an ku haya dalal badan oo caalamka.
Xukuumadda Soomaaliya oo warbixin kasoo saartey vayruska Karona
Soomaliya 31.01.2020. 14:36
Cudurkaan oo ka dilaacay Shiinaha ayaa la xaqiijiyey in uu dilay in ka badan 100 ruux.
Guusha Boris oo horseedeysa in UK deg-deg uga baxdo Midowga Yurub
Caalamka 13.12.2019. 08:54
Xanuun ka dillaacay degaanka katirsan Jariiban Mudug
Puntland 13.03.2016. 14:27
Somaliland 20.01.2016. 22:32